>Happy Birthday Ma Ngone | ချမ်းလင်းနေ
>Happy Birthday Ma Ngone
Filed under: စုံစီနဖာ — 11 Comments
>ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော နေ့ရက်ကလေးတစ်ရက်ပေါ့။ဒဒွေးဘော်ဒါ မငုံ (ကန္တာရမိုးစက်များ)ရဲ့ မွေးနေ့လေ။
>တအား ကျေးဇူးတင်တယ် ကိုချမ်းရေ။ ကျေးဇူးပါ။ ပျော်ရပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။
>HaPpY BiRtHdAy to You HaPpY BiRtHdAy to You HaPpY BiRtHdAy dear of အစ်မ … HaPpY BiRtHdAy to You !!! ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ အစ်မရေး) ။
>မွေးနေ့ ရှင်ရော မွေးနေ့ ကျင်းပပေးတဲ့လူရောပျော်ရွှင်ပါစေနော်Happy Birthday ပါ မမငုံလေး
>ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျာမွေးနေ့မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အေးချမ်းသာယာတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ပါစေဗျာ
>happy birthday ပါ မငုံရေခင်တဲ့ ရီနို
>ရွှေထီးနဲ့ကမငုံလား တော်တော်လန်းတာဘဲနော့်ကိုချမ်းရေ 😀 😛 Happy Birthday ပါ မငုံရေ 🙂 မွေးနေ့ ပွဲလေးကျင်းပ ပေးသူကိုချမ်းလည်း ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ
>ကိုချမ်း တော်ချက်ကတော့ ဟွန်းလာရောက်အားပေးသွားပါတယ်နော်…ပျော်စရာမွေးနေ့ပါ ငုံ…နှင်း
>Happy Birthday ပါ။ ဖိတ်ထားခြင်း မရှိပဲနဲ့ ရောက်လာပါတယ်။ မွေးနေ့ရှင်ရော မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပပေးသူပါ ဘ၀ခရီးတလျှောက် မွေးနေ့တရာကျော်ကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။
>မွေးနေ့ရှင်ရော မွေးနေ့ပွဲလာမည့်သူတွေရောမွေးနေ့ စာစုလေးရေးပေးသူရောအားလုံး..အားလုံး…ပျော်ပါစေ….
>ကိုချမ်းလင်းနေရေ…မွေးနေ့ရှင်အစ်မကတော့..တော်တော်ပျော်မှာပဲနော်…။သူငယ်ချင်းကို..ပျော်ရွှင်မှုလက်ဆောင်ပေးတတ်တဲ့ ကိုချမ်းလည်း…ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ…။မွေးနေ့ရှင်အစ်မကို မသိဖူးပေမယ့် ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျ…။ဟက်ပီး… ဘတ်(ဒ်)ဒေးပါခင်ဗျာ…။ခင်မင်တဲ့ဏီလင်းညို
>နောက်ကျမှ ရောက်လာပါတယ်။ပျော်ရွှင်ပါစေ မငုံရေ။
« >နံနက်ခင်းကို လှစေခြင်း